भिण्डी खानुको यति धेरै फाइदाहरु रहेछन्…हेर्नुहोस् । सेयर पनि गर्नुहोस् ।
काठमाडौं- भिण्डी के हो ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो तरकारीका रुपमा सबैले प्रयोग गरेका हुन्छ । कतिपय मानिसलाई भिण्डी मनपरे पनि केहीले यसको तरकारी मनपराउँदैनन् ।
तर यसको विशेषता जान्ने र बुझ्नेले भने सही तरिकाले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । आज हामीले भिण्डीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पु¥र्‍याउने विवध फाइदाका विषयमा जा’नकारी दिएका छौं ।
हरियो साग सब्जीका रुपमा भिण्डीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपाल लगायत विश्वका अन्य देशहरुमा पनि मानिसद्वारा भिण्डीको परिकारलाई अत्या’धिक मन पराइन्छ।
भिण्डीमा शरीरका लागि लाभदा’यक हुने विभिन्न ख’निज त’त्वहरु पाइने गर्दछ। यसमा पाइने गु’णकारी तत्वहरुले शरीरको अनावश्यक तौल घटा’उनदेखि लिएर मुहारमा चमक तथा चाउरीपना कम गर्न मद्दत गर्दछ।
भिण्डीका फाइदाहरु भिण्डीमा पाइने पेक्टिनका कारण यसले शरीरको कोले’स्ट्रोललाई घटाउन मद्दत गर्दछ। साथै यसमा पाइने सोल्युबल फाइबरले रगतमा कोले’स्ट्ट्रोललाई नि’यन्त्रण गरि मु’टु रोगको जो’खिम कम गर्दछ। भिण्डीमा प्रशस्तमात्रामा पाइने यूजेनोल मधुमेहका विरामीका लागि फाइदाजनक हुनेगर्दछ।
यू’जेनोलले शरीरमा सुगरको मात्रा नि’यन्त्रण गरी, म’धुमेह हुने जो’खिम कम गर्दछ। एनिमियाका बिरा’मीहरुका लागि पनि भिण्डी निकै प्र’भावकरी शब्जी हो। भिण्डीमा पाइने आइरनले हेमो’ग्लोविनको निर्माण गर्न मदत पु¥र्याउँदछ र भिटामिन के ले रक्त’श्राव रोक्ने कार्य गर्दछ।
भिण्डीमा भरपुर मात्रामा सो’ल्युबल फाइबर पाइन्छ जुन पाचन प्रणालीका लागि अत्यन्तै प्रभ्कारी हुन्छ। यसले पेट फुल्ने, क’ब्जियत र ग्यास जस्तो सम’स्याहरु हुन दिँदैन। साथै हड्डी बलियो बनाउनका लागि पनि भिण्डी फाइदाजनक शब्जी हो।
भिण्डीमा भिटामिन सी सँगै एन्टि’अक्सिडेन्ट प्र’चुर मात्रामा पाइने हुँदा यसले प्रतिरक्षा प्र’णालीलाई सुधारगर्नुका साथै विभिन्न सं’क्रामक रो’गहरुसँग ल’ड्न मद्दत गर्दछ। यसको सेवनले चि’सोलाग्ने समस्या पनि कम हुन्छ।
Previous फर्सीको मुन्टा खानुहोस् , यति धेरै छन फाइदाहरु…हेर्नुहोस् ।
Next सावधान ! चिया पिएपछि यी ३ चीज कहिल्यै नखानुहोस् ।